FAALLOOYIN – Page 2 – Warfaafiye:
Heshiiska Berbera waa qeyb ka mid ah istaraatiijiyada isbadalka…
ilo wareedyo Muhiima ayaa inoo xaqeejiyay in Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo diyaarshay qorsho, halis ah laguna weerarayo ganacsato ka soo jeeda Beelweynta Hawiye kuna sugan Magaalada Muqdisho. Weerarkan qorshahiisa la diyaarshay…
Editor Super Dec 15, 2017 0
Xildhibaan Cabdi weli Maxamed Qanyare ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay Wadaadada ku fadwoonaya Xildhibaanada iyo Siyaasinta mucaaradka, isagoo oo tilmaamay in hadaan Siyaasada laga heshiin oo madaxda aqligooda soo noqon aay imaan karto…
R/W Khayre oo Fashilmay Iyo 5; Walxood oo muujisay is casilaadda Drs: Maryan Qaasin !!
Editor Super Nov 18, 2017 0
Xil ka tegidda Drs: Maryan Qaasin; Wasiiraddii gargaarka iyo maareynta musiibooyinku waxa uu soo kordhiyey su'aalo iyo wax iska weydiin ku saabsan kartida Wasiirka koowaad ee Xukuumaddu u leeyahay xallinta caqabadaha shaqo ee ka dhexdhasha…
War lagu qoray Wargeyska New vision ee kasoo baxa dalka Uganda ayaa lagu sheegay in la xiray jaamacadda stafford oo ku taala magaalada kampala kadib markii la ogaaday in shahaadooyin been abuur ah ka iibiyeen xubno ka tirsan Wasiiradda…
Shan qodob oo Xasaasiya’oo la isku mari la yahay Shirka Madaxda Qaranka iyo Maamul…
Shirka Madaxda Qaranka iyo kuwa Maamul Gobaleedyada Soomaaliya ee maalmihii la soo dhaafay ka socday Magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay jiraan Doodo kulul oo ay yeelanayaan Labada dhinac. Wararkii ugu dambeeyay oo ay Warbaahinta ka…